Matahotra lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena, manova ny fahazaran’izy ireo ao amin’ny media sosialy ny mponin’i Hongkong · Global Voices teny Malagasy
Mampanahy ireo namaly fitsapan-kevitra ny fahaverezan'ny fahalalaham-pitenenana
Voadika ny 16 Oktobra 2020 6:34 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Français, Español, English, русский, Türkçe, українська, Português, polski, English
Hatramin'ny nampiharana azy tamin'ny volana Jolay, nosamborina ny olona noho ny fahatongavan'izy ireo fotsiny teo akaikin'ny toeram-pihetsiketsehana taloha.Nahemotra amin'ny taona ho avy ny fifidianana vaomieran'ny Mpanao lalàna. Nanao amboletra tao amin'ny biraon'ny Apple Daily, gazety mpomba ny demaokrasia ny polisy ary nisambotra ny mpanorina azy, Jimmy Lai noho ny fiampangana azy ho mpiray tsikombakomba amin'ny hery ivelany. Nosaziana ireo mpampianatra noho ny fanehoan-kevitra mpomba ny demaokrasia tao amin'ny media sosialy.
Teo anelanelan'ny 29 Aogositra sy 1 Septambra, nanontany tamin'ireo mpamaky azy ny Stand News, tamin'ny alalan'ny andiana fitsapan-kevitra anjotra hoe ahoana ny fiantraikan'ny fiarovam-pirenena amin'ny fiainan'izy ireo. Navoaka tao amin'ity tantara ity ny vokatry ny fitsapan-kevitra, izay olona miisa 2587 no namaly, ahitana tafatafa miaraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana, mpanao gazety, mpiasam-panjakana, mpampianatra sy ny hafa ihany koa ao anatin'izany. Tianay ho hita ny fomba fitantanan'izy ireo ny tahotr'izy ireo manoloana ny lalàna masiaka vaovao
Maromaro ny mpitantana Telegram nosamborina ho “mandrisika hanao fivoriana tsy ara-dalàna” hatramin'ny nivakisan'ny hetsika fanoherana fampodiana olona hody any Shina tamin'ny taona 2019.